Imp सुधारहरू जसले फेसबुक घटनाहरूलाई रक बनाउँदछ!
के त्यहाँ फेसबुक भन्दा राम्रो उपकरण उपकरण छ?
सोमबार, अप्रिल 27, 2015 शनिबार, जनवरी 14, 2017 Douglas Karr
हिजो हामीले हाम्रो दोस्रो वर्ष मनायौं यहाँ इन्डियानापोलिसमा संगीत र टेक्नोलोजी महोत्सव। टेक सेक्टरमा (र अरू कोही पनि) ब्रेक लिन र केही अचम्मका ब्यान्डहरू सुन्न यो घटना उत्सवको दिन हो। सबै आय मा जान ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज मेरो बुबाको सम्झनामा जसले डेढ वर्ष अघि एएमएल ल्यूकेमियाको साथ आफ्नो लडाई गुमाए।
Band ब्यान्डहरू, एक DJ, र एक हास्य कलाकारको साथ, त्यहाँ मार्केट गर्न र सम्भावितहरू, साथीहरू, फ्यानहरू, कार्यक्रम स्टाफहरू, र सहभागीहरूसँग संवाद गर्नको लागि वास्तवमै एक मात्र ठाउँ छ ... फेसबुक। तथ्य यो छ कि मैले भिडियोहरू र फोटोहरू साझेदारी गर्न सक्थें, ट्याग समूहहरू र प्रायोजकहरू, र त्यसपछि कार्यक्रमको ब्यान्डहरू र प्रायोजकहरू प्रचार गर्न र उनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि मात्र सरल छ। फेसबुक विज्ञापन जोड्नुहोस्, र हामी हाम्रो घटनाको पहुँच विस्तारमा विस्तार गर्न सक्षम छौं।
जब मेरो साइटसँग जानकारी थियो, यो फेसबुकको जस्तो फ्रिलिving समुदाय हुन गइरहेको छ। हामी प्राय जसो कम्पनीहरूले उनीहरूको साइटमा समुदाय विकास गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेको छ र म वर्णन गर्दछु कि यो कति गाह्रो छ। उत्पादन, सेवा, ब्रान्ड ... वा घटना वरपर मानिसहरूले केन्द्रित गर्दैनन्। यो घटना एक समर्थक को सप्ताहन्त को एक टुक्रा थियो र त्यो जहाँ फेसबुक एक फिट फिट छ।
यदि मैले फेसबुक घटनाहरूको लागि केहि इच्छा गरेको भए, तिनीहरू हुन्:
टिकट बिक्री अनुमति दिनुहोस् - हामीले हाम्रो बिक्रीको लागि इभेन्टब्रिट मार्फत काम गरेका छौं तर यसको मतलब त्यहाँ त्यहाँका मानिसहरूका बीच एक ठूलो विच्छेदन थियो भनेर उनीहरूले भने कि जा र ती मानिसहरु वास्तवमा खरिद गरियो टिकट यो कसरी हुन सक्दछ यदि मैले फेसबुक मार्फत टिकट खरीदहरू, टिकट छुटहरू, र समूहहरूको लागि टिकट खरीदहरू गर्न सक्ने भए?
फोटो र भिडियोमा घटनाहरू ट्याग गर्नुहोस् - यसको सामना गरौं, हामी सबै व्यस्त छौं प्रत्येक कार्यक्रम, फोटो, वा भिडियोको लागि ह्याशट्याग गर्न। यदि फेसबुकले तपाईंलाई केवल कार्यक्रम स्थल र व्यक्तिहरू मात्र ट्याग गर्न अनुमति दिएको खण्डमा यो राम्रो हुनेछैन ... तर कसरी घटनाको बारेमा? तपाईंको फेसबुक पेज ट्यागमा जस्तो ट्यागलाई अनुमोदन वा हटाउन यसको लागि प्रशासकलाई छोड्नुहोस्।
ईमेल निर्यात वा मार्केटिंगलाई अनुमति दिनुहोस् - अब जब म घटना थियो ... म कसरी पछाडि जान र अर्को बर्ष मानिसहरूलाई आमन्त्रित गर्ने? यस्तो प्रकारको लाटो जस्तो देखिन्छ तर जब म पाहुनाहरूको सूची निर्यात गर्छु, म केवल नामहरूको सूची प्राप्त गर्छु। यसले मलाई कसरी मद्दत गर्दछ?
असीमित आमन्त्रितहरू - मैले कार्यक्रमको लागि केहि प्रशासकहरू सेटअप गरें र अन्तत: हामी सबैले निम्ता पठाएको आमन्त्रित संख्याको सीमा तोक्‍यौं, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति एक पटक मात्र आमन्त्रित भए। यी व्यक्तिहरू मेरा साथी हुन् वा मलाई पछ्याउँदैछन् ... तपाईं किन यस प्रकारको घटना निम्तावाटहरूको पहुँच सीमित गर्नुहुन्छ?
यदि मसँग यी विकल्पहरू छन् भने, म ईमानदारीसाथ पक्का पनि छैन कि म कार्यक्रम साइट बनाउनेछु वा एक टिकटिंग प्रणाली प्रयोग गर्नेछु।
हामीले ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि प्रयोग गर्‍यौं, तर केहि ब्यान्डसँग ट्वीटर खाता थिएन र अरूले ट्वीटर वा इन्स्टाग्रामको अनुगमन गरिरहेका थिएनन्। तर सबैजना फेसबुकको अघि, समयमा, र घटना पछि थिए। यसको सामना गरौं - शहरमा केवल फेसबुक घटनाहरू मात्र हुन्।
टैग: कार्यक्रम ट्यागि।फेसबुकफेसबुक घटनाहरुफेसबुक आमन्त्रितफेसबुक मार्केटिंगइन्स्टाग्राम घटनाहरूसंगीत र प्रविधि महोत्सवसंगीत उत्सवसंगीत टेक indyफोटो ट्याग गर्दैटिकट बिक्रीट्विटर घटनाहरू
२ Free नि: शुल्क डिजिटल मार्केटिंग उपकरणहरूको सूची
सफल सामाजिक मिडिया रणनीतिको लागि के पक्षहरू बनाउँछन्?
रायन सावरी (@ryansawrie)
अप्रिल 27, 2015 मा 5: 03 PM
महान पोस्ट डग! मैले पछिल्लो समय त्यही कुरा बुझ्दै आएको छु । फेसबुकले घटनाहरूमा थप लगानी गरेको हेर्न पाउँदा राम्रो हुनेछ।
अप्रिल 30, 2015 मा 8: 59 एएम
अद्भुत पोस्ट, डग! हो, फेसबुकको घटना उपकरण उत्तम हो, तर म अन्य सामाजिक मिडियाको शक्तिलाई कम आँकलन गर्दिन। ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि धेरै शक्तिशाली छन्।